May 2019 - Myanmar Fire Services Department
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ကောင်း ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်းရှိ နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
admin | May 30, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၃၀.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၉ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ကောင်း ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်းရှိ ပိုင်ရှင် ဒေါ်အေးအေးသင်း၏ (၃၆x၁၅)ပေ၊ RC (၂)ထပ်၊ ကုန်စုံဆိုင်ခန်း မြေညီထပ်တွင် ပလပ်စတစ်ဓါတ်ဆီပုံးမှ ပလပ်စတစ်ဗူးထဲသို့ ဓါတ်ဆီဖလှယ်စဉ် တည်ငြိမ် လျှပ်စစ်ဖြစ်ပြီး...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး၊ ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း
admin | May 29, 2019 | ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂၉.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၂၃ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နမ့်တွန်း ကျေးရွာအနီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၈၉/၄)နှင့် (၁၈၉/၅)အကြား လားရှိုးမှ သိန္နီသို့ ယာဉ်မောင်း ကိုယ်ပိုင်အမှတ်-တ/၄၀၀၃၄၀ တပ်သား မျိုးထက်အောင် အမှတ်(၉၁၂) စစ်မြေြပင် အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း၊ MI အမျိုးအစား...
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ကျုံပေါကျေးရွာ နေအိမ် မီးလောင်မှုသတင်း
editor | May 29, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
(၂၈.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၀၇ ၁၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးျမိဳ႕နယ္၊ က်ံဳေပါ ေက်းရြာရွိ (၂၀×၃၀)ေပ၊ အုတ္ကာ၊ အုတ္ခင္း၊ ကြန္ကရစ္ (အေပၚထပ္)၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ သြပ္မိုး ေနအိမ္တြင္ ျခင္ေဆးေခြထြန္းထားရာမွ အနီးရွိ ေမြ႕ယာသို႔ မီးကူးစက္ေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၀၇ ၃၀) အခ်ိန္...
Home RR Law Draft (17-6-2015)
admin | May 24, 2019 | မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ
PDF File is Here! View...
The Myanmar Fire Brigade Law
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရမ်ပူရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၀)တွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ရန်အောင်ကျေးရွာ၊ ပျော်ဘွယ်-နတ်မောက် ကားလမ်းမကြီးဘေး ရန်အောင်ကန်တွင် သစ� ....
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ရွံ့ပန်းရပ်ကွက်တွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ခေမာသီရိရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၈)တွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့၊ တလန်လိုရပ်ကွက်တွင် ကမ်းပါးယံပြိုကျမှုဖြစ်ပွား
Copyright © 2021 MSFD. Powered By MISL.